Pepe oo ku soo laabtay tababarka xulkiisa Portugal ka hor final-ka Euro 2016 + Sawirro – Gool FM
Pepe oo ku soo laabtay tababarka xulkiisa Portugal ka hor final-ka Euro 2016 + Sawirro
Haaruun July 9, 2016
(Paris) 09 Luuliyo 2016 – Xulka qaranka Portugal ayaa helay war farxad leh ka hor final-ka EURO 2016, kaddib markii uu Pepe tababarka dib ugu soo laabtay.
Difaaca kooxda Real Madrid ayaa lagu qasbay inuu seego kulankii xulkiisa Portugal uu 2-0 uga adkaaday Wales habeenkii Arbacada, kaddib dhaawac bowdada ah oo soo gaaray, taasoo keentay inay soo baxdo in shaki laga galiyo kulanka final-ka ee ay la leeyihiin France.
Si kastaba ha ahaatee, kaddib markii uu sii waday soo kabashadiisa dhaawac khamiistii iyo Jimcihii, Pepe ayaa sawirro laga soo qaaday isagoo tababarka la qaadanaya Saakay oo Sabti ah 22-ka ciyaaryahan ee xulkiisa Portugal.
Haddii loo arko inuu taam yahay, Pepe ayaa la filayaa inuu kulanka final-ka ka bedelo booska dhexe ee daafaca Portugal midkood labada xiddig ee Jose Fonte ama Bruno Alves.
EEG: Shaxdan ayey Portugal ku soo gali kartaa fiinaalaha Euro 2016
Barayaal ka socda FIFA oo siminaar u furay garsoorayaal Soomaaliyeed + Sawirro